Gore rezvi dzidzo rapera
Makapedza gore rese muchiti gore redzidzo muchiti murikudzidza maiti school fees yacho yaibvepi?
Ndoo kwakaenda bonus hakuna munhu anodzidza mahara!
gore rezvidzidzo bonus civil servants
Kusarongekamoxazol, Mapiritsi e January disease
Hawo mapiritsi! Anonzi "Kusarongekamoxazol" Munonwa matatu pazuva kusvika January apera ndeekudzivirira January disease
mushonga january disease
group chat ye Real vadyiwa ne Barcelona 4 nya
RealMadrid group chat afta vadyiwa 4-0 ne Barcelona:
Marcelo: haa boys Barca yakurema iyi
Benitez: iwewe unonyanyawo ku over lapper
Marcelo: Asi ndomatambiro angu ka mudhara
Ramos: Chitsaga manje ichocho dread .
Pepe: lol messi na Neymar vanondiziva
Varane : haa Pepe nasi moto wangawakawandisa zvesimba zvangazvisingashande
Cr7 : mxxm
Bale : Asi mukoma Ronaldo ramarova hapana
Benzema: mukoma rangovawo demo seravanopfeka kumusana
Cr7 : hapana ane ballon dor muno saka nyararai
Modric : ballon dor riya makangopiwawo zvekunyarwa Asi murishiri kuna messi
James : kana Neymar ndi Mudhara kuna cr7
Kroos : haa Isco vanorichengetawo
Ramos : uyo mphana ndichatomutyora kutraining
Benitez : cr7 ndotoshaya kuti ndomugarisa bonde Sei
Jese Rodriguez : wakufunga Bhora manje Mudhara
Pepe : ndotopindawo ipapo pa Ronaldo
Magetsi anouya taka rara wani
Unotonzwa vakuru vachiti hakuna chinouya wakarara.
Ko magetsi arikuuya takarara wani?
gochi gochi baba mwana kukara nyama
muzukuru mbuya chelsea fc 2015-16
nhamo zimbabwe Robert Mugabe zesa zinwa magetsi
Nandos Bulawayo 2017 collapse